Otú ndị na-ere ahịa ga-esi gbochie ọghọm ịga ụlọ ngosi | Martech Zone
Gaa na wara wara nke ụlọ brik-na-ngwa agha ụlọ ahịa na ohere, ị ga-ahụ onye na-azụ ahịa na anya ya kpọchiri na ekwentị ha. Ha nwere ike na-atụnyere ọnụahịa na Amazon, na-arịọ enyi maka nkwanye, ma ọ bụ na-achọ ozi gbasara otu ngwaahịa, mana enweghị mgbagha na ngwaọrụ mkpanaka abụrụla akụkụ nke ahụmịhe anụ ahụ. N'ezie, ihe karịrị pasent 90 nke ndị na-azụ ahịa na-eji ekwentị mgbe ha na-azụ ihe.
Riserị elu nke ngwaọrụ mkpanaka dugara ntoputa nke egosi, nke bụ mgbe onye na-azụ ahịa na-ele ngwaahịa na ụlọ ahịa nkịtị ma na-azụ ya n'ịntanetị. Dabere na nghoputa Harris, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara ndị na-azụ ahịa—46% - Showroom. Ka omume a na-akawanye njọ, ọ malitere mbibi na ọchịchịrị amụma banyere otu ọ ga-esi mebie mkpọsa anụ ahụ.
Ngosipụta ngosi ahụ nwere ike ọ gaghị emebe, mana nke ahụ apụtaghị na ndị na-ere ahịa anụ ahụ anaghị efunahụ ndị na-asọmpi. Ndị ahịa agaghị akwụsị iji ekwentị ha nyere ha aka mgbe ha na-azụ ahịa. Ndị na-azụ ahịa taa dị ọnụ ahịa ma chọọ ịma na ha na-enweta ihe kacha mma. Kama ịnwa ileghara ma ọ bụ ịlụ ọgụ megide ngwaọrụ mkpanaka n'ime ụlọ ahịa (nke bụ ihe na-abaghị uru), ndị na-ere ahịa kwesịrị ịgbalịsi ike ịhụ na mgbe onye na-azụ ahịa jiri igwe eji eme ihe n'ụlọ ahịa, ha na-eji ngwa nke ndị na-ere ahịa, kama nke onye ọzọ. .
Approoming - The Echekwala App Dabere Ahịa kenha
Anyị maara roomlọ ngosi na ntụgharị ya Ime ụlọ akwụkwọ - ebe onye na-azu ahia na-acho ihe na ntanetị, ma emechaa zụta ya n’ụlọ ahịa. Ha abụọ na-adabere na onye na-azụ ahịa na-achọta ihe n'otu ihe ma na-azụ ahịa na ọnọdụ dị iche iche. Ma gịnị ma ọ bụrụ na ndị na-ere ahịa lekọtara ngwa ha dị ka mgbatị nke ụlọ ngosi ha ma gbaa ndị na-azụ ahịa ume ka ha tinye aka na ngwa ahụ mgbe ha nọ na ụlọ ahịa. Dịka e kwuru n’elu, isi ihe mere onye ji azụ ahịa na-etinye aka n’egwuregwu bụ iji hụ ma ha ga-enweta ahịa ka mma na ndị na-ere ahịa na-asọ mpi ma ọ bụ nweta ọrụ ka mma. Ndị na-ere ahịa ahịa nwere ike izere ịhapụ azụmaahịa site na ijikọta ọnụahịa ọnụahịa na / ma ọ bụ ọnụahịa dabara na ngwa nke aka ha, nke na-egbochi ndị na-azụ ahịa ilegharị anya na ebe ọzọ iji zụta ha - n'agbanyeghị agbanyeghị ọwa ha hụrụ ngwaahịa a.
Dịka ọmụmaatụ, ọnụahịa ọnụahịa bụ nnukwu okwu maka ndị na-ere ahịa elektrọnik. Ndị mmadụ na-aga ụlọ ahịa, chọta TV ha chọrọ ịzụ, wee lelee Amazon ma ọ bụ Costco iji hụ ma ha ga-enweta ahịa ka mma na ya. Ihe ha nwere ike amaghị bụ na ndị na-ere ahịa nwekwara ike ịnweta Kupọns, onyinye na ụgwọ ọrụ iguzosi ike n'ihe nke ga-akwụ ụgwọ TV n'okpuru asọmpi ahụ, eziokwu nke furu efu mgbe ị na-eji ngwaọrụ nchọgharị nke ndị asọmpi. Enweghi onyinye ọ bụla, ndị na-ere ahịa nwekwara ike ịnwe nkwa nha ọnụahịa, mana ọ chọrọ onye otu ka ọ hụ ihe akaebe na ngwaahịa a dị maka ọnụ ala dị ala site na asọmpi ahụ, ha ga-edejupụta ụfọdụ akwụkwọ ka ọnụ ahịa ọhụrụ ahụ wee dị. enwere ike igosipụta n'oge ndenye ego tupu ikwe ka onye ahịa zụta. Enwere esemokwu dị ukwuu, n'ihi na ihe ga-abụ ọnụ ahịa onye na-ere ahịa ga-enye onye na-azụ ahịa ihe ọ bụla. Site na iji ngwa ahịa na-ere ahịa iji gbanye ọnụahịa ọnụahịa, usoro niile nwere ike ime na sekọnd - onye na-azụ ahịa na-eji App Retailer's elele ngwaahịa ahụ wee hụ ọnụahịa ọ na-enye ha mgbe ha jikọtara ya na ndị na-asọmpi n'ịntanetị, ọnụahịa ọhụrụ na-akpaghị aka. na Shopper profaịlụ, na e kenyere ha mgbe ha zuru ezu ndenye ọpụpụ.
Nkwurịta okwu bụ isi ebe a. Ọbụna ma ọ bụrụ na onye na-ere ahịa na-enye atụmatụ njiri mara ọnụahịa, ọ na-eju ọ bụrụ na ndị na-azụ ahịa amaghị maka ya. Dị ga-etinye ego na ịmatakwu banyere arụmọrụ nke ngwa ha ka ndị ahịa zụrụ ihe ngosi, ha Ime ụlọ kama, noro na ndu ndi na ere ahia.
Egwuregwu nke ụlọ ahịa
Ozugbo emere ka ndị na-azụ ahịa bata na gburugburu ebe obibi, ikekwe site na ntanetị na-aga nke ọma, enwere ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ ndị na-ere ahịa nwere ike isi jikọta ha. Nwere ike ịjụ ndị na-azụ ahịa ka ha nyochaa ihe ma mezie akụkụ nke ahụmịhe ịzụ ahịa dị na ụlọ ahịa. Ọnụ ego dị ịtụnanya, ọnụahịa ọnụahịa na-enye, yana onyinye dị egwu dabere na ụlọ ahịa ahụ ka ndị ahịa na-enwe ọ excitedụ ma na-etinye aka.
Ọzọkwa, itinye aka na ngwa na-enye ndị na-ere ahịa nghọta ka ukwuu banyere ndị ahịa ha bụ. Were ya na onye ọrụ batara n'ụlọ ahịa, nyochaa otu ihe, wee nweta ọnụahịa pụrụ iche nke na-agbanwe site na ụbọchị. Ka ndị mmadụ na-eji ngwa ahụ enyocha ihe, ka ndị na-ere ahịa ozi na-enweta ndị ahịa ha. Ndị ahịa agaghịdị azụta ihe iji nyocha. Ha nwere ike nweta isi okwu iguzosi ike n'ihe, nke mepụtara usoro achịcha maka ihe dị n'ime ụlọ ahịa ahụ. Ndị na-ere ahịa ahịa nwere ike iji data ahụ ghọta ihe ndị na-ekpo ọkụ bụ ihe ndị ahịa na-azụ n'ezie. Ọ bụrụ na e nwere otu ihe nwere obere mgbanwe ntụgharị, onye na-ere ahịa nwere ike ịgba ọsọ nchịkọta iji chọpụta ihe kpatara ya. Ọ bụrụ na e nwere ọnụahịa ka mma na onye na-asọ mpi, ndị na-ere ahịa nwere ike iji ozi ahụ belata ọnụahịa nke ha, ma si otú ahụ na-asọmpi.
Zọ ọzọ ndị na-ere ahịa nwere ike isi gbochie mfu na ịsa ahụ bụ site n'akọkọta ihe. Ihe ndị dị n’ụlọ ahịa nwere ike jikọtara ha na ihe ndị anaghị ebu n’ụlọ ahịa, mana nke ahụ ga-aga nke ọma. Ọ bụrụ na mmadụ zụrụ uwe, ngwugwu ahụ nwere ike ịgụnye otu akpụkpọ ụkwụ na-achịkọta nke dị naanị site na ụlọ nkwakọba ihe nke ụlọ ahịa ahụ. Ma ọ bụ ọ bụrụ na mmadụ zụta akpụkpọ ụkwụ, ngwugwu ahụ nwere ike ịgụnye sọks - ụfọdụ ụdị nke enwere ike ịhazi nke ọma maka mmasị onye ahịa, ma zigara ha ụlọ. Ngwa bụ ohere dị ukwuu iji mepụta ngwugwu dị mma maka ndị ahịa, na ime nke a, ọ bụghị naanị ịbawanye ahịa, kamakwa belata ọnụ ahịa site na ịmachi ndị SKU na-ebu n'ụlọ ahịa na ụlọ nkwakọba ihe etiti.
Ọzọkwa, enwere ike ịgbakwunye ụyọkọ iji tinye azụmaahịa na ndị mmekọ mpaghara na-enye ngwaahịa na ọrụ pụrụ iche nke na-aga nke ọma na ngwaahịa nke ndị na-ere ahịa. Tụlee onye na-ere egwuregwu. Ọ bụrụ na onye ahịa na-anwa ịzụta otu skis, njirimara dị na ngwa ahụ nwere ike inye aka duzie ha n'usoro mkpebi site na ịtụ aro ụdị mkpọda skis kacha mma na ọbụlagodi ịnye nchịkọta maka ngwụsị izu. Mkpakọrịta nke atọ nke na-enye ndị na-ere ahịa ohere ịnye ngwugwu ngwugwu mebere ọnụ mpi nke bara uru karịa onye na-azụ ahịa karịa ịzụrụ otu ihe.
N'ikpeazụ, ndị na-ere ahịa nwere ike izere igosipụta ihe ngosi ma bulie elele site na ịkwado site na ịmepụta ụgbọ ala ụgbọ mmiri. N'ikpeazụ, ụgbọ ibu anụ ahụ na ụlọ ịntanetị kwesịrị ibu otu. Gagharị n'etiti ntanetị na ntanetị kwesịrị ịbụ ahụmịhe na-enweghị ntụpọ na ndị ahịa kwesịrị ịnwe nhọrọ na mkpịsị aka ha. Daysbọchị ndị a BOPIS (Buyzụta Nhọrọ Onlinentanetị Na Storelọ Ahịa) bụ oke iwe niile. Ma ahụmịhe ahụ na-agbaji otu oge na-echekwa, ebe onye ahịa ahụ nwere ike ịchọta ihe ndị ọzọ ha chọrọ ịzụta, mana ugbu a ọ kwesịrị ị kwụ n'ahịrị ugboro abụọ iji nweta ihe ndị ahụ. Dika odi, ha kwesiri inwe ike banye n'ime uzo ha rue BOPIS, bia ulo ahia ka ichota ihe ndi ozo ha choro, tinye ha na ugbo ala ha nke ndi na-ere ahia, ma mezue ndenye ego maka BOPIS na In Chekwaa ihe na otu Pịa, n’otu ebe ndenye ọpụpụ dị n’otu.
Na Ọgwụgwụ, Ahụmịhe Ndị Ahịa Dịkarịsịrị
Lọ ahịa anụ ahụ na-aghọ ahụmịhe nke ya-naanị lee ka ọtụtụ ndị na-ere ahịa n'ịntanetị na-emepe ebe brik na-ngwa agha. Ndị na-azụ ahịa chọrọ ịnweta mmetụ ahụ, mmetụta, ọdịdị, na isi nke ngwaahịa ma echegbula onwe gị maka ọwa ahụ. Asọmpi na ndị egwuregwu n’egwuregwu na ọnụahịa bụ agbụrụ n’ogo ala. Iji jigide azụmahịa ha, ndị na-ere ahịa kwesịrị ịnye ahụmịhe na-echekwa na-echekwa na ịntanetị nke na-enye oke uru na ịdị mma nke ndị ahịa anaghị aga ebe ọzọ.
Tags: ọnụahịa ngwaọnụahịa dabere na ngwakwenyeagbakọtaahụmahụ ahịaegwuregwu nke ụlọ ahịaotúna-eji ngwa ịnye ọnụahịalossesụgbọ mmiri omni-channelịnye ọnụahịaọnụahịa ngwaahịaahụmahụ ahịaegosishowrooming ọnwụ